साथ पाए जित्न सकिन्छ क्यान्सर | Safal Khabar
काठमाडौँ । ललितपुरकी विनु केसीले स्तन क्यान्सर भएपछि भारतमा उपचार गराइन् । अहिले उनले क्यान्सरलाई पूर्ण रूपमा जितिसकेकी छन् । क्यान्सर जित्न उनको परिवारको ठूलो साथ रह्यो । परिवारले साथ नदिएको भए क्यान्सरलाई जित्न धेरै कठिन हुन्थ्यो । क्यान्सर हुँदा निकै गाह्रो थियो । आफन्त घरमा आएर हौसला दिनुभन्दा रोइदिन्थे ।
यस्तै नेपाल क्यान्सर सर्भाइभर सोसाइटीका अध्यक्ष प्रमिता खनालले पनि स्तन क्यान्सर जितिकेकी थिइन् । उनले पनि क्यान्सर रोगीलाई दया होइन, हौसला चाहिएको बताइन् । स्तन क्यान्सर हुँदा कतिपयको स्तन काटिएको भन्दै स्तनलाई जोगाएरै क्यान्सरको उपचार गर्नसकिने बताइन् । उनले राज्यले क्यान्सर रोगीलाई दिइँदै आएको खर्चमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् ।
वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. अरुण शाहीले महिनावारी भएको ५ देखि ७ दिनको बीचमा स्तन परीक्षण गर्न जरुरी रहेको जानकारी बताए । उनले गर्भवती र महिनावारी सुकेका महिलाले स्तन परीक्षण गर्नुपर्ने जानकारी दिँदै आफ्नो स्तन क्यान्सर भए÷नभएको आफैँ जान्न सकिने बताए । नेपालमा प्रत्येक दिन छ जना महिलामा स्तन क्यान्सरको समस्या देखिने गरेको भन्दै डा. शाहीले तीन जना महिलाको मृत्यु हुने गरेको जानकारी दिए । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।